သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): စန်းကွန့်ဌာနေ အစချီ သံဝေဂ ရတုပိုဒ်ငယ်
စန်းကွန့်ဌာနေ အစချီ သံဝေဂ ရတုပိုဒ်ငယ်
သခင် ဘယ်သို့ မေ့မည်နည်း။
မကြင် ဘယ်သို့ တွေ့မည်နည်း။
အမြင် ဘယ်သို့ ရွေ့ မည်နည်း။
လောကဓံတရားလေးကို သံဝေဂ အမှတ်လေးနဲ့မှတ်သွားပါတယ် သူကြီးမင်းရေ :P
အားကျပါတယ်ဆိုမှ ကဗျာတွေစဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်နေရပါလားနော်။
Friday, 8 March 2013 at 16:41:00 GMT
စန်းကွန့်က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲပာင်။ ဒုတိယ အကြောင်းက ဖတ်ရတာ နဲနဲထောင့်နေသလားလို့ ။ ဘာမှနားလည်လို့ အပြစ်ပြောတာ မပာုတ်ပါ။ စိတ်ဆိုးနဲ့နော်။ ကျန်အပိုင်းတွေက တကယ်ကောင်းပါတယ်။သိပ်သည်းကျစ်လျစ် လှပနေတာပဲ။ သူကြီး ရဲ့ ကဗျာဥာဏ် ကိုတော့အားကျတယ်။ အဲဒီလိုလေးဥာဏ်ကောင်းချင်လိုက်တာ။
Friday, 8 March 2013 at 16:54:00 GMT
သံဝေဂတရားလေးကို ရတုပိုဒ်နဲ့ ရေးနိုင်အောင်းကောင်းလို့ ချီးကျူးဂုဏ်ယူမိပါရဲ့...
မြန်မာကဗျာရေးတာ ကိုမင်းဧရာပဲ ဖတ်ဖူးတယ်.အစ်ကိုရေ..။ အရမ်းသဘောကျပါတယ်.။
ကျွန်တော်လည်း ရေးပါတယ်.။ ဒါပေမယ့် အနည်းအကျဉ်းပါ. ။ အစ်ကို့ဘလော့လင်ခ့်လေးကို
ယူသွားပါတယ်အစ်ကို.။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. နောက်လည်း ဒီလို မြန်မာကဗျာလေးတွေ များများရေးပေးပါဦး.။
Friday, 8 March 2013 at 21:11:00 GMT
တီတင့်ရေ... ကဗျာဆိုတော့ တိုတိုလေး ရေးရတာလေ။ ခဏလေးနဲ့ ပြီးတယ်။ လက်လဲ သိပ်မညောင်းတော့ဘူး။ ပုံပြင်တွေဆို တိုက်ပင်တွေ အတော်လေးရိုက်ယူရတာမဟုတ်လား။ အချိန်လဲ ပေးရတယ်လေ။ အခုအချိန်မှာ သူကြီးမင်းလဲ မအားမလပ်ဆိုတော့ ကဗျာလေးတွေဘဲ ဆားချက်တဲ့အနေနဲ့ ရိုက်ရိုက် တင်နေတာလေ။း)
လာအားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။ တီတင့်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလို အကြံပေးတာကိုလေ။ သူကြီးမင်းက စိတ်မဆိုးတတ်ပါဘူး။ ပြုပြင်ပေးမဲ့လူကို မျှော်နေတာလေ။ ပထမကတော့ "ဆန်းကွန့်ဌာနေ" ဆိုပြီး စာကို စီထားတာလေ။ အထူးအဆန်းတွေချည်း ကွန့်မြူးနေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခု (သို့) လူတစ်စုကို ရည်ရွယ်ချင်တာပါ။ နောက်တော့မှ ဆန်းအစား စန်းဆိုပြီး ပြောင်းဖြစ်လိုက်တယ်။ စန်းတွေ အရမ်းကွန့်မြူး (စန်းပွင့်)နေတဲ့ ပန်းဘုရင်မတစ်စုကို ရည်ရွယ်ချင်တာပါ။ အဲဒီစန်းကြောင့်ဘဲ သူတို့ဘ၀ အညွန့်ချိုးခံရပြီး ဘ၀ဆွံ့အ ကန်းသွားတဲ့ သူတွေနဲ့ တင်စားချင်တာပါ။ ဒါကြောင့် စန်းကွန့်ဆိုတာ စန်းတွေအရမ်းကွန့်မြူး(ပွင့်)နေတာကို ဆိုလိုခြင်းရယ်ပါ။
အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင်တော့ ပထမဆုံး ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးက "ပန်းညွန့်ညှာချွေ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ ဒါနဲ့.. ရေးမှာက ရတုဆန်ဆန်ဆိုတော့ သူနဲ့ ပထမပိုဒ်တိုင်းမှာ ကာရန်တူအောင် "စန်းကွန့်ဌာနေ၊ ပန်းညွန့်ညှာချွေ၊ ကန်းဆွံ့ဗျာပွေ" ဆိုပြီး စဉ်းစား ရေးလိုက်တာပါ။
ဆိုတဲ့ အချပိုဒ်တွေလဲ ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ။
ဖတ်ရတာ နဲနဲထောင့်နေတာကို ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ဖြုတ်သင့်တာဖြုတ်ပြီး ထည့်သင့်တယ်ထင်တာကို ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။
ကျေးဇူးဘဲနော်။ အခုလို တကူးတက ကွန်မင့်ရေးပြီး အကြံပေးတာ။ နောက်လဲ မကြာမကြာ လာရောက်ပြီး အကြံပြုပေးပါဦး။ ကြိုဆိုလျှက်ပါဘဲ။
ညီမသဒ္ဓါရေ... လာရောက်ချီးကျူးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းက ရမ်းဖမ်းမှန်းတုတ် အဆင့်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။
ညီရေ... ကြိုဆိုပါတယ်။ အလည်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီရဲ့ လင့်ခ်ကလေးကိုလဲ ချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
Friday, 8 March 2013 at 22:49:00 GMT
စလယ်ဆုံး သုံးပါး အားလုံးကောင်းတယ်သာဂျီးရေ
မကြင် ဘယ်သို့ တွေ့မည်နည်း-------အဲတာကိုပြောတာလေ....
Saturday,9March 2013 at 04:29:00 GMT
Saturday,9March 2013 at 04:44:00 GMT
သူဂျီးရေ စကားလုံး သုံးထားပုံတွေ ကောင်းလိုက်တာ
သူဂျီးတို့ကတော့ မြန်မာ စာလုံးတွေ ပိုင်မှပိုင် အားကျလိုက်တာ။ ကဗျာထဲက လွမ်းဇာတ်ထုပ်ကနေ အမြန်ရုန်းထွက်နိုင်ပါစေလို့။
Saturday,9March 2013 at 05:34:00 GMT
အထူးတလည် စောဒကတက်စရာ မရှိပါသော
သူကြီးမင်းကို ကျေးဇူးပါ :P
Saturday,9March 2013 at 12:47:00 GMT
စိတ်ဝင်တစားရှိပေမယ့် ကဗျာညဏ်မှာတော့ တဂျီးတို့၊
လှတာမို့ တဂျီးတို့ရေးသမျှကိုပဲ အားပါးတရဖတ်ရတယ်
Sunday, 10 March 2013 at 02:50:00 GMT
သူဂျီးမင်း ကဗျာတွေဖတ်ပြီး ကဗျာရေးချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ် ဒါပေမဲ့ မရေးတတ်တာက ခက်တယ်...း((
Sunday, 10 March 2013 at 08:07:00 GMT
အရမ်းမိုက်တယ် သိလား တဂျင်းမီး...
Sunday, 10 March 2013 at 15:15:00 GMT
Sunday, 10 March 2013 at 15:55:00 GMT
ကဗျာ ကောင်းချက်ဗျာ... ဂွတ်ရှယ်.. ဂွတ်ရှယ်...
Monday, 11 March 2013 at 13:51:00 GMT
ကဗျာကို အထက်ကနေအောက်၊ အောက်ကနေ အထက် ၂ ခေါက် ထက်မက ဖတ်လိုက်တယ်..ဒေါ်အိမ်မက်တို့ မြန်မာစာကြေ ပုံများအဲ့လို အဲ့လိုလေ...
အရမ်းကို အဓိပ္ပါယ်ပါတဲ့ ကဗျာလေးပါ..
Tuesday, 12 March 2013 at 00:57:00 GMT
ဖတ်ရတာ ထွေးထွေးအိအိ ရှိလိုက်တာ သူကြီးရာ
အိမ်ရောက်မှ ထပ်ဖတ်ဦးမယ် စာရွက်ထဲကိုပါ ကူးသွားတယ် သူကြီးရေ....။
ဒါမျိုးလေးတွေကို များများရေးပါ သူကြီးရာ။
Wednesday, 13 March 2013 at 13:00:00 GMT
စကားလုံးလေးတွေ တွဲစပ်ထားတာ လှပါ့
Friday, 15 March 2013 at 02:41:00 GMT
တဂျီးမင်းရေးတဲ့ တကယ့်မြန်မာကဗျာစစ်စစ်ကို ဖတ်သွားပါတယ်...... ပိုဒ်စုံရတုဆိုတာ ကဗျာရေးတဲ့သူတွေအဖို့ တော်တော်သတိထားရတဲ့ကဗျာဗျ... ခုလိုလေး အနှစ်သာရရှိရှိ ဖတ်လိုက်ရတာ တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျာ... တစ်တို့လောက်..... အဲ.... နောက်တစ်ပုဒ်လောက်...... :D
Saturday, 16 March 2013 at 11:02:00 GMT
အခုနောက်ပိုင်း မြန်မာကဗျာတွေ စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ မရှိတော့ဖူး နေရာလည်းမရတော့ဖူး ရေးသူဖတ်သူလည်း ရှားပါးသွားပြီ အခုနေချိန်မှာ သဂျီးတို့လိုကဗျာဆရာတွေ မြန်မာကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်လောက်ဝင့်ဝင့်ထည်ထည် ထုတ်ဝေစေချင်တယ်ဗျာာာ
Saturday, 16 March 2013 at 14:36:00 GMT
လာဘော အလာဘော ယသော အယသော
Tuesday, 19 March 2013 at 20:47:00 GMT
စကားလုံးတွေကလည်း ညီညွတ်တော့ ဖတ်ရတာ အသံကို သာလို့..။
Friday, 22 March 2013 at 09:52:00 GMT
ထိုငြမ်း ဆင့်တုံ့ မဆင့်တုံ့